Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo hadal kasoo saaray go’aanka maanta ee maxkamadda ICJ – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo hadal kasoo saaray go’aanka maanta ee maxkamadda ICJ
Rai’isul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, Mudane Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa soo dhaweeyay go’aanka maxkamadda caalamiga ee garsoorka ee ku saabsanaa soohdinta badda.
“Waxaan ku kalsooneyn in Soomaaliya ay ku guuleysaneyso dacwadaan. Maanta, waxaan aragnaa natiijada dadaalka xukuumadaha ku meel gaarka iyo xukuumadda hadda jirta ay ugu jireen difaaca xuduudaheena. Waa dadaal isku dhaf ah oo loo galay difaaca israacsanaanta dhulkeena,” Ayuu yiri ra’iisul wasaaraha.
“Waxaan u hambalyeynayaa qareenada Soomaaliyeed ee ka dooday dacwadaan muhiimka ah. Waxaan rabaa in aan xasuusiyo Soomaalida, gaar ahaan hoggaamiyeyaasha siyaasadeed, inay muhiim tahay in hal hadaf la wada yeesho. Dacwadaan waxaa ay ka dhexeysaa labo dal ee ka ma dhexeyso Soomaali. Waa in hadafku uu noqdaa in lagu guuleysto dacwada oo la difaaco xuduudaheena ee maahan hadafku in loo adeegso hadaf siyaasadeed . Waxaan idiin sheegayaa in marxaladdan ay tahay mid taariikhi ah,” ayuu yiri.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya waxaa ay ka codsatay maxkamadda inay calaamadeyso soohdinta badda, go’aanna ay ka gaarto xuduudda. Maxkamadda ayaa go’aan ka gaartay in ay dhageysato dacwadda ka dibna calaamadeyso xuduudda.Ra’iisul wasaaraha ayaa soo dhaweeyay go’aanka Maxkamadda oo kama dambeys ah uguna baaqay Kenya in ay tixgeliso.